Ndụmọdụ taa bụ 17 Septemba 2020 site n'aka onye edemede Syriac na-enweghị aha | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ndụmọdụ taa bụ Septemba 17, 2020 site n'aka onye edemede Syriac na-enweghị aha
Onye na-ede akwụkwọ Syriac nke XNUMX na-amaghị aha ya
Ezigbo ezinụlọ dị na onye mmehie, 1, 4.5.19.26.28
"Ya na-agbaghara ya ọtụtụ mmehie"
Womanhụnanya nke Chukwu, n’ịchọ ndị mmehie, ka nwanyị na-eme mmehie n’agwapụtara anyị. N'ihi na site n'ịkpọ ya, Kraịst na-akpọ agbụrụ anyị niile ka anyị hụ ya n'anya; n’onwe ya kwa, ọ dọtara ndị mmehie niile na mgbaghara ya. Ọ gwara ya, ma ọ kpọrọ ihe nile e kere eke ka amara ya. (...)
Olee onye ebere nke Kraist na-emeghị, ma ọ bụrụ na, ịzọpụta onye mmehie, nabatara ọkpụkpọ oku nke onye Farisii? N'ihi nwanyị ahụ agụụ na-agụ mgbaghara, ya onwe ya chọrọ ka agụụ na-agụ tebụl Saịmọn onye Farisii, ebe ọ na-egosi na tebụl achịcha, ọ kwadebere maka onye mmehie, tebụl nke nchegharị. (...)
Ka I nwee ike isonye na tebụl ahụ, ị ​​mara na mmehie gị hiri nne; otu o sila dị, inwe obi nkoropụ maka mgbaghara n'ihi na mmehie gị dị oke njọ nye gị bụ ikwulu Chineke ma mehie onwe gị. N'ihi na ọ bụrụ na Chineke ekwela nkwa ịgbaghara mmehie gị n'agbanyeghị etu ha dị ọtụtụ, ị nwere ike ịgwa ya na ị gaghị ekwenye ya site n'ịgwa ya, sị: “Mmehie m dị ukwuu nke na ị gaghị agbaghara ya. Can nweghị ike ịgwọ m ọrịa m ”? Kwụsị ya ma tie mkpu na onye amụma ahụ: "Emehiewo m megide gị, Onyenwe anyị" (2 Sam 12: 13). Ọ ga-aza ozugbo: «agbagharawo m mmehie gị; ị gaghị anwụ ». Ka otuto dịrị ya, n’aka anyị nile kemgbe ọtụtụ narị afọ. Amen.
Nata akwukwo ogugu ubochi